Qoyska Almaas oo diiday in gabadhooda dishay xabad wiifto ah
By WARIYAHA CANADA , GAROWE ONLINE
Gabadhan ayaa "mid laga horudhacay" ku tilmaamay sheegasho ka timid AMISOM oo toogashada walaasheed lagu khaarijiyey.
TORONTO, Canada – Ilwaad, oo la dhalatay Almaas oo 20-kii bishaan ku dhex-dhimatay xarunta aadka loo ilaaliyo ee Xalane halkaas oo fariisin u ah shisheeyaha, ayaa meesha ka saartay in walaasheed ay dishay "xabbad wiifto ah".
War-saxaafadeed qoyskeeda uu soo saarey kaasoo ay ku saxiixaneyd Ilwaad oo Qaramadda Midoobay ka tirsan ayay ku shaaciyeen in ay qabliga ka jabeen.
Bayaankooda ayaa waxay ku caddeyeen reerka uu sii wadi doono dedaaladda uu ku bixinayo nabadda iyo gargaarka dadka Soomaaliyeed.
Qoyskaan oo caan ka ah Soomaaliya ayaa aabahood, Elman Cali Axmed, kaasoo nabadda u dhaqdhaqaaqi jiray ayaa Muqdisho lagu dilay 1996-dii.
Almaas oo dhaxalka aabaheed xoojineysay ayaa sarkaal dhanka warbaahinta u qaabilsan u ahayd ururka Midowga Yurub.
Geerideeda ayaa timid saacado kadib markii ay kasoo baxday shir uu EU-da qabanqaabiyey waxayna kusii jeeday madaarka Aadan Cadde.
Howlgalka AMISOM oo beeniyay la shirqoolay ayaa shaaciyey in Almaas ay u dhimatay xabbad wiifto ah oo haleeshay gaarigeeda, balse waa sheegasho ay naqdiday Ilwaad.
"Wax kasta oo aan laga soo saaro duruufihii ay Almaas ku geeriyootay waa kuwa laga sii horudhacay, mana noqon doonta kuwa caawiya qoyskeena," ayay ku bilowday.
Sidda ku cad war-murtiyeedka, qoyska Elman ayaa wuxuu dalbanayaan baaritaano buuxa oo ay wada sameeyaan dowladdaha Soomaaliya iyo Canada.
Waxay ku dartay: "Wararkaa waa mid noqon kara mid leysla dhex meero suurtolgalnimada in Almaas ay dishay "xabbad wiifto" ah".
Ilwaad Elman, oo sanadkan 2019 u sharax-neyd abaalmarinta nabadda aduunka, ayaa madax ka ah xarunta Elman Peace.
Almaas ayaa horey uga soo shaqeysay safaaradda Soomaaliya ee Kenya, halkaas oo xoghayaha koowaad k ahayd intii u dhaxeysay 2016-17.
Ugu dambeyntii, reerka ayaa wuxuu cod dheer ku dalbaday in xaaladaha dalka ka jira aan lagu lifaaqin toogashadda murugada ku reebtay ee Almaas.
Marxuumadda ayaa waxay geeriyootay iyadda oo Uur leh, waxaana taas ay ka dhigan tahay in qoysku waayey laba naf "mana jirto cid noo bedeli karta," ayay ku yiraahdeen qayb kamid ah war-saxaafadeedka ay soo saareen oo uu arkay GO.
Dad badan ayaa is waydiinaya sababta keentay in si joogto ah dab uga kaco suuqa Bakaaraha.
Askar ka tirsan NISA oo ku dhintay Qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Soomaliya 03.11.2018. 14:20